Home | Myanmar Computer Professionals Associations
MCPA Member Application Form
Ruby On Rails Application Form
MCPA Quiz-2015 Registration Form and Rules
EC Application Form
ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game Entry Form
Barcamp Myanmar (Yangon, Manday and many more)
ICT ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ ICT ဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၏ အရည်အသွေးပိုမိုပြည့်ဝလာစေရန် နှင့် ICT ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ ပိုမို မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ IT ပညာရပ် ဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
IT ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ၊ အစိုးရ/ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့် သင်တန်းကျောင်းများမှ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား၊ သူများ အတွက် IT ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်များ အတွက် MCPA IT Career ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
MCPA အသင်းသားများ၏ ICT ပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ ICT ဆိုင်ရာ Research & Development လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်နှင့် MCPA R&D Center တည်ထောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ICT Lab ကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
ICT professionals have much to gain by joining the association. Below are some of the benefits:-
Eligible for scholarships to training (locally and overseas)
Eligible to join the MCF Resource Center
Monthly newsletter delivered to home
There are5types of memberships in MCPA, covering just about anybody who is already an expert in ICT or is on the way to becoming one.
Join MCPA Now! Click here for Registration Form
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန နှင့်ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှ ကျောင်းသား၊ကေျာင်းသူများ၏ Industry Tour သွားရောက်လေ့လာခြင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၁၄) ရက် သောကြာနေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ (၃၆) ဦးနှင့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျ... Read more
Category : MCPA News
Bsides Myanmar Information Security Conference 2017 Yangon
သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Besides Myanmar 2017 (Information Security Conference) ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ (၅:၃၀)အထိ Conference Hall, Main... Read more
Petya/NotPetya နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ထုတ်ပြန်သော သတိပေးအကြံပြုချက် ၂/၂၀၁၇
Petya/NotPetya နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ�ထုတ်ပြန်သော သတိပေးအကြံပြုချက် ၂/၂၀၁၇
၂၉ ဇွန် ၂၀၁၇
MCPA’s Advisory on Petya/NotPetya Ransomware
Petya/NotPetya အမည်ရ ဆိုက်ဘာတိုက်... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာပညာရှင်အသင်းနှင့် Job Net အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာပညာရှင်အသင်းနှင့် Job Net အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ (၂၉.၆.၂၀၁၇)၊ ညနေ (၄)နာရီမှ (၆)နာရီအထိ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်... Read more
"Trends And Patterns In The Data Economy" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူးကျင်းပသော Think Blue Data (TBD)မှ CEO ဖြစ်သော Mr.Paul Janecek ၏ "Trends And Patterns In The Data Economy" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ (၂၉.၆.... Read more
"MCPA Professional Series #5ဖြစ်သော “Fundamental Windows and Linux Command Line” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် “Powerful Windows Command Line” & “Essential Linux Command Line” ဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်၊ စနေနေ့ နေ့လယ် (၂:ဝ၀ မှ ၅:ဝ၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park အခန်း (၂၀၅) တွင် အသင်းသားများ၊ ကျောင်းသူ ကျ... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင်“Trends and Patterns in the Data Economy” ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀:ဝ၀ မှ ၁၂:ဝ၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park၊ အခန်း(၂၀၅) တွင် Think Blue Data (TBD) မ... Read more
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျုတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူးကျင်းပသော အသင်းသားစုံညီအခမ်းအနားနှင့် နည်းပညာဟောပြောပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(ျပည္)၌ (၂၃.၆.၂၀၁၇) ေသာၾကာေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အသင္းသားစုံညီအခမ္းအနားႏွင့္ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာပညာရ... Read more
About WannaCry Ransomware: Interview with U Ye Thura Thet
အိုင္တီက႑အတြက္ လူငယ္ေတြ အသင့္ရွိၾကရဲ႕လား
Myanmar Computer Professionals Association is inviting their members for "Pi For Myanmar Project
MCPA is going to publish the book on MCPA Professional Series for the enthusiasts
MCPA States/Division Branches
MCPA YANGON REGION
MCPA MANDALAY REGION
MCPA SAGAING REGION
MCPA BAGO REGION
MCPA MAGWAY REGION
MCPA AYEYARWADDY REGION
MCPA SHAN STATE
MCPA KAYIN STATE
Ground Floor, Building (9),MICT Park, Hlaing Township Yangon, Myanmar
© Copyright Myanmar Computer Professionals Association.